“Doorashooyinku waa inay ka dhacaan dalka
Hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa sheegay in dalka aysan ka dhici karin doorasho la’aan DG Jubbaland iyo Puntland iyadoo dowladdu ay shaacisay Sabtidii in aysan dib u dhigayn howlaha doorashada.
Qoor-Qoor ayaa dhankiisa sheegay inuusan wax jawaab ah ka helin hogaamiyayaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo musharixiinta, laakiin dhinacyadaasi waxay iska fogeeyeen inay ku wargeliyaan Hogaamiyaha Galmudug.
Wuxuu iska difaacay eedaha loo soo jeediyay ee ah inuusan helin warqad jawaab ah, maadaama aan la siinin warqad ujeedkeedu yahay wadahadalada ka hor inta aan la gaarin go’aanka ah in la qabto doorasho hal dhinac ah.
Hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo la hadlay BBC-da ayaa meesha ka saaray in aysan dhici karin doorasho la’aan Jubbaland iyo Puntland, maadaama ay qeyb ka ahaayeen heshiiskii bishii Sebtember 2020, mana jirin wax qorshe ah oo meesha looga saaray.
“Weligey ma maqal doorasho aan ka qeyb gal aheyn, waxaa la isku raacay in xaqa ka qeyb galka, hadii ay jiraan wax tabasho ah in la xaliyo, lama soo hadal qaado in Puntland iyo Jubbaland ay is casileen, marwalba waxaa laga hadlayaa wax lagu xaliyay in laga qayb galo doorashooyinka Sidaas waxaa yiri madaxweynaha Qoor-Qoor.
Hogaamiyaha maamulka Galmudug ayaa iska fogeeyay dowladda, laakiin wuxuu sheegay in tallaabadaasi ay ka tarjumeyso wadashaqeynta uu la leeyahay dowladda federaalka.
eventful opening of the peculiar consultation
F. Brisset Foucault: “For twenty years violence